I-china i-6 yolawulo lwe-impedance yolawulo oluqinileyo-lwebhodi yabenzi kunye nabathengisi | Kangna
Ulawulo lwe-6 lwe-impedance yolawulo oluqinileyo-lwebhodi ene-stiffener
Uhlobo lwezinto: FR-4, polyimide
Min ubungakanani umngxuma: 0.15mm
Kugqityiwe ubukhulu ibhodi: 1.6mm
Ubungakanani be-FPC: 0.25mm
Ixesha Lead: iintsuku ezingama-20
Ukuzalwa kunye nophuhliso lwe-FPC kunye ne-PCB yazala imveliso entsha yebhodi ye-flex engqongqo. Ke ngoko, kwi-PCB prototyping, ibhodi yesekethe eguqukayo kunye nebhodi engqongqo zidityanisiwe kunye ngokweemfuno zetekhnoloji efanelekileyo emva kokucinezela kunye nezinye iinkqubo zokwenza ibhodi yesekethe eneempawu ze-FPC kunye neempawu zePCB.
Kwi-PCB prototyping, indibaniselwano yebhodi engqongqo kunye ne-FPC ibonelela ngesona sisombululo sisemgangathweni kwisithuba esilinganiselweyo. Le teknoloji inika ithuba lokudibanisa ngokukhuselekileyo izixhobo zecandelo ngelixa uqinisekisa ukuzinza kunye noqhagamshelwano, kunye nokunciphisa inani leeplagi kunye nezinto zokudibanisa.
Ezinye izibonelelo zebhodi eqinileyo_yokuqina kunye nozinzo loomatshini, okukhokelela kwinkululeko yoyilo eyi-3d, ukufakelwa okwenziwe lula, ukonga indawo, kunye nokugcinwa kweempawu zombane ezifanayo.
Ziqinile-Flex PCBs Ukubumbela Izicelo:
Ii-PCB ezi-Rigid-Flex zibonelela ngezicelo ezininzi, ukusukela kwizixhobo ezifanelekileyo ukuya kwiiselfowuni nakwiikhamera zedijithali. Ngokwandayo, ukuqina kwebhodi eqinileyo esetyenzisiweyo kuye kwasetyenziswa kwizixhobo zonyango ezinje ngee-pacemaker zendawo yazo kunye nokunciphisa ubunzima. Ezi zibonelelo zifanayo zokusetyenziswa kwe-PCB eguqukayo zinokusetyenziswa kwiinkqubo zolawulo ezifanelekileyo.
Kwiimveliso zabathengi, i-rigid-flex ayenzi nje ukwandisa indawo kunye nobunzima kodwa iphucula kakhulu ukuthembeka, ishenxisa iimfuno ezininzi zokudityaniswa kwamalungu kunye nobuthathaka, iintambo ezibuthathaka ezinomdla kwimicimbi yokunxibelelana. Le yimizekelo nje, kodwa ii-PCB eziqinileyo zeFlex zingasetyenziselwa ukuxhamla phantse kuzo zonke izixhobo zombane eziphambili kubandakanya izixhobo zovavanyo, izixhobo kunye neemoto.
Ngqongqo-Flex PCBs Technology and Process Production:
Nokuba kuveliswa uhlobo oluqinileyo oluguquguqukayo okanye ubungakanani bemveliso efuna ubungakanani obukhulu be-PCB eQinisekisiweyo kunye neNdibano ye-PCB, itekhnoloji ibonakalisiwe kwaye ithembekile. Isahlulo se-PCB esilunge ngakumbi silungile ekoyiseni indawo kunye nemiba yobunzima ngeedigri zenkululeko.
Ukuqwalaselwa ngononophelo kwezisombululo ezi-Rigid-Flex kunye novavanyo olufanelekileyo lwezinto onokukhetha kuzo kwinqanaba lokuqala kwinqanaba lesakhiwo se-PCB esiqinileyo siza kubuyisa izibonelelo ezibalulekileyo. Umenzi we-PCB oqinileyo-we-Flex kufuneka abandakanyeke kwangoko kwinkqubo yoyilo ukuqinisekisa ukuba uyilo kunye neenxalenye ze-fab zombini zilungelelanisa kwaye zinika ingxelo yokwahluka kwemveliso yokugqibela.
Isigaba sokuvelisa esiqinileyo-seFlex sikwanobunzima kwaye sichitha ixesha kunebhodi eqinileyo. Zonke izinto eziguquguqukayo kwindibano eQinisekisiweyo-yeFlex zinendlela yokuphatha eyahlukileyo ngokupheleleyo, yeetching, kunye neenkqubo zeSeringing kuneebhodi eziqinileyo zeFR4.
Izibonelelo zePCB eziQinisekisiweyo
• Iimfuno zesithuba zinokuncitshiswa ngokusebenzisa i-3D
• Ngokususa isidingo sokudibanisa kunye neentambo phakathi kwamalungu angqingqwa, ubukhulu bebhodi kunye nobunzima benkqubo iyancitshiswa.
• Ngokwandisa indawo, kuhlala kukho ukubala okuphantsi kwiindawo ezithile.
• Ambalwa amalungu e-solder aqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
Ukuphathwa ngexesha lokuhlangana kulula xa kuthelekiswa neebhodi eziguqukayo.
• Inkqubo yeNdibano ye-PCB eyenziwe lula.
Unxibelelwano oluhlanganisiweyo lweZIF lubonelela ngeendlela ezilula zemodyuli kwimeko yenkqubo.
• Iimeko zovavanyo zenziwe lula. Uvavanyo olupheleleyo ngaphambi kokuba ufakelo lube nokwenzeka.
• Amalungiselelo okuhamba neendibano ancitshiswe kakhulu ngeebhodi zeRigid-Flex.
• Kuyenzeka ukuba kwandiswe ubunzima bokuyilwa koomatshini, ekwaphucula nenqanaba lenkululeko yezisombululo zezindlu ezifanelekileyo.
Csisebenzisa i-FPC ukubuyisela ibhodi engqongqo?
Iibhodi zesekethe eziguqukayo ziluncedo, kodwa azizukutshintsha iibhodi zesekethe ezingqongqo kuzo zonke izicelo. Iindleko zibalulekile,. Iibhodi zesekethe eziqinileyo azixabisi kakhulu ukwenza kunye nokufaka kwindawo yokuziqambela yomthamo ophezulu wevolumu.
Ngokwesiqhelo, isisombululo esifanelekileyo semveliso yokuyila enye ibandakanya ukujikeleza okuguqukayo xa kukho imfuneko kwaye kuqeshwe iibhodi zesekethe eziqinileyo, ezinokuthenjwa ezinokuthenjwa apho kunokwenzeka ukugcina iindleko zokuvelisa kunye nendibano zincitshisiwe.
Egqithileyo Thin Polyimide bendable FPC nge FR4 stiffener
Okulandelayo: Umngxuma wokufaka umngxunya kwi-HDI yesilivere yokuntywila ngesilivere
iBhodi eziManyeneyo eziPhezulu zeTg ngokuntywiliselwa ...